Diinta miyaa lagu dhashaa? – Kaasho Maanka
Dadka islaamka ahi waxay aaminsan yihiin badankoodu in dadka adduunka ku nool oo dhami ay ku dhasheen islaamnimada, balse hooyada iyo aabuhu gaaleeyaan ama islaamiyaan ilmaha dhalashada kadib.
Waxaa laga weriyey nebi Maxamed inuu yidhi; (Majiro ilmo dhasha ilaa waxa lagu dhalaa fidrada “Islaamka”, labadiisa waalid ayaa ka dhiga Yuhuudi, Kiristan ama Majuusi – ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺇﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ، ﻓﺄﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ أﻭﻳﻨﺼﺮﺍﻧﻪ أﻭﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ)
Waa maxay waxyaabaha lagu dhalan karaa?
Waxyaalaha lagu dhashaa waa wixii aan u baahnayn barasho ama kasbasho balse ku abuuran qofka. Waxayaabaha lagu gartana waxaa kamida in laga helo qof walba oo adduunka guudkiisa saaran oo aysan u baahnayn dadaal deeraada oo qofku bixiyo si uu gacanta ugu dhigo ama u gaaro.
Way jiraan waxyaabo qofku ku dhasho sida baahida hurdada, cuntada ama galmada kuwaas oo kale waa la odhan karaa waa waxyaabo fidro ah, laakiin maxaa ka jira in qofku ku dhasho diinta Islaamka?
Qofku inuu dhasho isagoo muslim ah jecel diinta islaamka waa been aan sal iyo raad toona lahayn, ma jiro qof dhasha isagoo iimaan leh oo Ilaah kaliya rumaysan, ma jiro qof dhasha isago jecel ama baahi u qaba quraanka, ma jiro qof dhasha isagoo ku hadla af-Carabi. Iimaanku wuxuu yimaada barasho iyo qancid kadib oo waa wax la kasbado.
Qofku markuu dhasho waxaa lagu bar-baariya laguna koriyaa dhaqanka iyo afka waalidkii mana jiro afkaa iyo dhaqankaa mid aan ahayn oo lagu koriyo ubadka. Haddii islaamka lagu dhalanayo oo aan uurka hooyadeen kala soo baxayno iimaanko qanjaha ina jooga maxaa la inoo geeya dugsiyada Quraanka? Maxaa soonka iyo salaadda la inoo baraa? Maxaa la inoo dhalan rogaa?
Way jiraan baahiyo dadku la dhashaan laakiin diintu waxyaabahaas ka mid maaha. Diintu waa wax la barto waalidkaana laga dhaxlaa inta badan oo waalidkaa hadduu Muslim yahay Muslim baad ahaan, hadduu masiixi yahayna kiristan baad noqon, deegaanka aad ku nooshahay iyo dhaqamada ka jira ayay ku xiran tahay kooxda aad la safanayso.
Diinta iyo rumeynta jiritaanka Ilaahay ma aha wax fidro ah oo lala dhasho balse waa wax la kasbado ama la barto marka adduunka la yimaado, waxaa fidro ah diin la’aanta. Xadiiskanina gebi ahaanba waa been waayo ma jiro qof og maalintuu dhashay, ma jiro qof dhashay isagoo duuban sida cajaladdii, balse adigoo jira oo nool ayaadan ogeyn inaad jirto, sannadihii u horeeyey noloshiisa yaa ka warrami kara?
Ma jiro qof garanaya maalintii uu muslimay, badankiinu waxaad magaca diinta iyo afkaba ka dhaxasheen waalidkiin, iimaanka aad sheegeysaan iyo islaamnimadaba waxaad ka dhaxasheen waalidkiin mana aha wax ku yimi aqoon iyo qanaaco idiin gaar ah. Mid kasta oo idinka idin ka mid ahi wuxuu garaadsaday isagoo muslim ah, Quraanka yaqaan af-Soomaalina ku hadla. Miyaad caddayn kartaa oo odhan kartaa maalintaasaan shahaadada qabsaday oo islaamka soo galay ama ku qancay in Islaamku diin saxan yahay oo qaatay?
Dadku hadday diinta ku dhalanayaan maxaa Murtadiin loo odhan waayey kuwa aan muslimka ahayn balse ku dhashay islaamnimada waalidkoodse ka dhigeen Kiristanka? Ilmaha yar ee Ameerika ku dhashay saw muslimnimo kuma dhalan? Hadii waalidkii gaaleeyo saw murtad noqon maayo? Saw waajib maaha in xadkii ridada lagu fuliyo? Waa marka la raaco xadiiska odhanaya dadku islaamnimaday ku dhashaan.
Runtu waxa weeye dadku waxay ku dhashaan diin la’aan, waxayna dhashaan ubadku iyagoo bog cad ah oo aan garaadkooda waxba ku qornayn, balse waalidkooda ayaa u doora jidka ay marayaan. Ilmaha waxa waalidkii u doora diinta iyo dhaqanka uu isaga waalidka ahi haysto.
Iimaanka diiniga ahi maaha taqliid ama wax aad cid kaga dayan karto mana aha wax cid gaar ah laga dhaxlo sida waalid oo kale, iimaanka diiniga ahi waa wax ku iman kara qanaacada iyo qaadashada qofka barasho iyo lafa-gur kadib. Dadku waxay ku leeyihiin diintaad ku dhalatay, diin laguma dhasho, laakin hooyada iyo aabaha ku dhalay ayaa diin hebel haysta taasna micneheedu maaha iimaankii hooyadaa iyo aabaha ayaa ku jira hidde-sidahaaga.
Waxaa iyana muhiim ah in la ogaado iimaanka diiniga ahi inaanu ahayn wax la isku qasbi karo, xoogna laguma ilaalin karo oo iimaanka diiniga ahi maaha wax la cabiri karo sida heer kulka jidhka ama la miisaami karo sida culayska jidhka. Iimaanka qofku aaminsan yahay xoog lagagama qaadi karo, tusaale ahaan lama odhan karo diid ama beeni waxa aad aaminsantahay.
Qof waliba ha is waydiiyo maalintii uu muslimay? Haddii aanan dooran awoodna aanan u lahayn inaan doorto waalidkayna ii dooray waxa aan aaminayo sidee ku odhan karaa anaa doortay oo ku qancay? Maanta oo aan garaad iyo garashaba leeyahay oo aan wax dooran karo wixii la ii dooray haddii aan ku qanci waayo inaan ciqaab ku mutaysto soo qalad iyo meel ka dhac maaha? Wax aanad dooran sidee ciqaab ugu mudan kartaa?
Ma jirto diin lagu dhashaa tay doonto ha ahaate oo diintu maaha abtirsiin iyo qabiil lakala dhaxlo. Haddii lagu dhalanayo nebiyo iyo rusul Ilaah masoo direen.
Mshalh waa qormo aad ii cajibisey alle maaka ha usiyaadsho cid alaale cidii maskaxdeeda kasoo maaxatay eebe ha unaxriisto❤
Last edited 4 Bilood Kahor by Mohamed Ali Adam
Wax kasta oo jira waxa ay ka samaysanyihiin tamar (energy). Haddaba haddii ay jirto wax loo yaqaano ‘naf’, waa qasab in ay tamar ka samaysantahay. Tamartuna sida aynu ogsoonahay lama abuuri karo lamana burburin karo, balse waa ay qaab badalataa uun.
W/Q: Khaled Hassan 29th July 2018